राम्रो लेखन, एक आवश्यक कौशल!
द्वारा पोस्ट गरिएको Tranquillus | फरवरी 4, 2021 | लिखित र मौखिक संचार कौशल
आज, पेशेवर दुनिया मा, एक अनिवार्य र अक्सर उपेक्षित कौशल भनेको "कसरी लेख्न जान्ने" हो। एउटा यस्तो गुण जुन डिजिटल युगमा प्राय: भुल्दछ।
यद्यपि, समयसँगै, हामी बुझ्छौं कि यस सीपले केहि बिन्दुमा भिन्नता ल्याउन सक्छ। दृष्टान्तको रूपमा, HRD का साथ यो एक्सचेन्जलाई विचार गर्नुहोस्:
« आज योजना गरिएको भर्तीको लागि, तपाईंले एक उम्मेद्वार भेट्टाउनुभयो ?
- हामीले असंख्य परीक्षणहरू गरेका थियौं र अन्तमा हामीसँग दुई जना उम्मेदवारहरू थिए जुन समान पृष्ठभूमि, समान अनुभवहरू थिए। तिनीहरू दुबै यो नयाँ स्थितिमा सुरू गर्नका लागि उपलब्ध छन्।
- तपाईं तिनीहरू बीच निर्णय गर्न के गर्दै हुनुहुन्छ ?
- यो जटिल छैन ! हामी दुई मध्ये कुन एक उत्तम लेखन प्रवाह छनौट गर्नेछौं। »
शंकाको अवस्थामा प्राथमिकता सबैभन्दा उत्तम लेख्नेलाई दिइन्छ।
माथिको उदाहरणले धेरै राम्रोसँग वर्णन गर्दछ, कसरी भर्ती प्रक्रियामा लेखन अयोग्य हुन सकिन्छ। चाहे तपाइँ कुनै पनि उद्योगमा राम्रो वा नराम्रो, अनुभवले देखाएको छ कि उत्कृष्ट लेखनले एक व्यक्तिलाई केहि अवसरहरू लिन सक्छ। यसैले उनको लेखनको गुणवत्ता एक विशिष्ट कौशल हुन्छ। एक तत्व जुन भाँडामा लिने सन्दर्भमा अतिरिक्त वैधता प्रदान गर्न सक्छ। एउटा भर्ती फर्मले यसमा प्रमाणित गर्छ: समान कौशलको साथ, सबैभन्दा राम्रो लेख्नेलाई भाडामा लिनुहोस् »। उम्मेदवारको लेखनको प्रकृति प्रायः उसले आफ्नो काममा लान सक्ने हेरचाहको चित्रण गर्दछ; एक विशेषता जसले भर्तीकर्ताहरूलाई उदासीन छोड्दैन।
रिड एक प्रोफेसर वा शिक्षक संग प्रयोग गर्न को लागी विनम्र सूत्र
लेखनको महारत: एक आवश्यक सम्पत्ति
लेखन कार्यको महत्त्वपूर्ण पक्ष हो, चाहे लेखनमा इमेल, एक पत्राचार, एक रिपोर्ट, वा एक फारम। यसरी यसले दैनिक कार्यहरूको संगठनलाई सहज बनाउँछ। थप रूपमा, लेखन व्यावसायिक जीवनमा बारम्बार छ। विशेष गरी इलेक्ट्रोनिक मेल, जुन कुनै पनि व्यवसाय भित्र एक आवश्यक प्रक्रिया बनिरहेको छ। पदानुक्रम र सहयोगीहरू वा ग्राहकहरू र आपूर्तिकर्ताहरू बीचको आदानप्रदानहरू बीचको निर्देशनहरू। त्यसकारण राम्रोसँग लेख्नु एक वांछित सीपको रूपमा परिणत हुन्छ, भले पनि यो व्यापार सन्दर्भ प्रणालीहरूमा विरलै देखिन्छ।
हामी मध्ये धेरैका लागि लेखन धेरै तनावपूर्ण छ। यो असुविधा हराउनको लागि, आफैलाई निम्न प्रश्नहरू सोध्नुहोस्:
के मसँग फ्रेन्चमा लेख्ने आधारभूत ज्ञान छ?
के मेरो लेखोट सामान्यतया सटीक र पर्याप्त स्पष्ट छ?
के मैले मेरो ईमेलहरू, रिपोर्टहरू र अधिक लेख्ने तरिका परिवर्तन गर्नुपर्दछ?
यसबाट हामी कस्तो निष्कर्षमा पुग्न सक्छौं?
माथि उल्लेख गरिएका प्रश्नहरू एकदम वैध छन्। व्यावसायिक वातावरणमा, दुई आवश्यक चीजहरू प्रायः अपेक्षा गरिन्छ जब यो लेखनको कुरा आउँछ।
हामीसँग पहिले, फारम जहाँ यो विशेष ध्यान दिन आवश्यक छ लेखन, माorthographe, तर पनिविचारहरूको संगठन। यसैले, तपाइँको प्रत्येक लेख संक्षिप्तता नबिर्सिएमा सटीक र स्पष्टताको ध्यानमा राख्नु पर्छ।
अन्तमा, सामग्री कि तपाइँ तपाइँका सहकर्मीहरू वा उच्च हात लेखनका लागि उपलब्ध बनाउनुहोस्। प्रासंगिक हुनु पर्छ। यो लेख्नको लागि लेखनको सवाल होइन तर पढ्न र बुझ्नु हो। तपाईं जस्तो, कसैसँग समय खेर जाने छैन।
रिड सहकर्मीबाट जानकारीको लागि अनुरोधको जवाफ दिन इमेल टेम्पलेट
राम्रो लेखन, एक आवश्यक कौशल! मार्च 5th, २०२०Tranquillus
अघिल्लोके मसँग कागजातहरू समर्थन नगरी टिकटहरू फिर्ता गर्न अस्वीकार गर्ने अधिकार छ?
निम्नटेलिworking्कि Streलाई सुदृढ गर्दै: रोजगारदाताहरूका लागि वास्तविक जोखिम के हो?
एक पेशेवर वातावरण मा एक ईमेल लेख्नुहोस्
एक सफल तलब वृद्धि अनुरोध को लागी पत्र टेम्पलेट
कर्पोरेट ईमेल प्रयोग गर्नुहोस्
व्यावसायिक इमेल मा सबै भन्दा साधारण त्रुटिहरू